မြန်မာနိုင်ငံ (အင်္ဂလိပ်: Myanmar၊ ယခင်အင်္ဂလိပ်အမည်: "Burma" (ဘားမား)၊ တရားဝင်အားဖြင့် ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် (Republic and the Union of Myanmar)) သည် အရှေ့တောင်အာရှတွင် ဧရိယာအားဖြင့် ဒုတိယ အကျယ်ဝန်းဆုံး နိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၁၉၄၈ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်နေ့တွင် ဂရိတ်ဗြိတိန်နိုင်ငံထံမှ (အင်္ဂလိပ်လို "Burma" အဖြစ်နှင့်) ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် လွတ်လပ်ရေးကို ရရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စု ဆိုရှယ်လစ် သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ၁၉၇၄ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီ ၄ ရက်တွင် လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် ၁၉၈၈ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်တွင်လည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အဖြစ် ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန် ၁၈ ရက်တွင် လည်းကောင်း အမည်များပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အာဏာရစစ်အစိုးရအား အသိအမှတ် မပြုသော အဖွဲ့အစည်းများက ဘားမား (Burma) ဟုသာ အသိအမှတ်ပြု သုံးစွဲခဲ့သည်[ကိုးကားချက်လိုသည်]။ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက် နေ့မှစ၍ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အဖြစ် ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်အလံကိုလည်း ယခင် နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအစိုးရလက်ထက် ၂၀⁠၀၈ ခုနှစ်တွင် ပြဋ္ဌာန်းခဲ့သော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ တွင် သတ်မှတ်ထားသည့် နိုင်ငံတော် အလံ ဖြင့် အစားထိုး၍ ပြောင်းလဲ အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
Republic and the Union of Myanmar
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ Steinberg၊ David I. (2002)။ Burma: The State of Myanmar။ Georgetown University Press။ p. xi။ ISBN 978-1-58901-285-1။ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; name "steinberg" defined multiple times with different content
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ ၁၁.၃ ၁၁.၄ ၁၁.၅ ၁၁.၆ Background Note: Burma။ Bureau of East Asian and Pacific Affairs။ U.S. Department of State (August 2005)။ 2006-07-07 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၉.၀ ၁၉.၁ ၁၉.၂ ၁၉.၃ Houtman၊ Gustaaf (1999)။ Mental Culture in Burmese Crisis Politics: Aung San Suu Kyi and the National League for Democracy။ ISBN 4-87297-748-3။
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ Fink၊ Christina (2001)။ Living Silence:Burma under Military Rule။ ISBN 1-85649-926-X။
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ "The National Convention"၊ The Irrawaddy၊ 2004-03-31။ 2006-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on 11 October 2007။
↑ ၃၀.၀ ၃၀.၁ ၃၀.၂ ၃၀.၃ ၃၀.၄ ၃၀.၅ CIA Factbook။6October 2010 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။3August 2008 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၂.၀ ၃၂.၁ ၃၂.၂ Than၊ Mya (2005)။ Myanmar in ASEAN: Regional Co-operation Experience။ ISBN 981-230-210-7။
↑ ၃၃.၀ ၃၃.၁ Myanmar’s Forest Law and Rules။ BurmaLibrary.org။ 2006-07-15 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃၈.၀ ၃၈.၁ Chiefs of State and Cabinet Members of Foreign Governments: Burma။ Central Intelligence Agency (2006-06-02)။ 30 September 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-07-11 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၀.၀ ၆၀.၁ Challenges to Democratization in Burma (PDF)။ International IDEA (November 2001)။ 23 July 2006 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 2006-07-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆၈.၀ ၆၈.၁ Gordon၊ Raymond G., Jr. (2005)။ Languages of Myanmar။ SIL International။ 2006-07-14 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၀.၀ ၇၀.၁ Gordon၊ Raymond G., Jr. (2005)။ Language Family Trees: Sino-Tibetan။ Ethnologue: Languages of the World, Fifteenth edition။ SIL International။ 2006-07-09 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၇၃.၀ ၇၃.၁ Tsaya (1886)။ Myam-ma, the home of the Burman။ Calcutta: Thacker, Spink and Co.။ pp. 36–37။
↑ ၈၃.၀ ၈၃.၁ ၈၃.၂ Khin Myo Chit (1980)။ Flowers and Festivals Round the Burmese Year။
↑ ၈၄.၀ ၈၄.၁ Shway Yoe (1882)။ The Burman — His Life and Notions။ New York: Norton Library 1963။ pp. 211–216, 317–319။
↑ ၈၇.၀ ၈၇.၁ Kong၊ Foong Ling (2002)။ Food of Asia။ Tuttle Publishing။ ISBN။
↑ ၉၄.၀ ၉၄.၁ ၉၄.၂ ၉၄.၃ ၉၄.၄ ၉၄.၅ Page - 8,7Days Daily Newspaper, 26.4.2020
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မြန်မာနိုင်ငံ&oldid=728045" မှ ရယူရန်
၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၉ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၁:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။